Micheal Keating oo cambaareeyey Qaraxii Wadajir ee magaalada Muqdisho | SAHAN ONLINE
Micheal Keating oo cambaareeyey Qaraxii Wadajir ee magaalada Muqdisho
MUQDISHO – Ergayga gaarga ah ee Qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating ayaa cambaareeyey weerarkii qaraxa ahaa ee shalay ka dhacay goob shacab badan ku sugnaayeen degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Micheal Keating ayaa sheegay in weerarkaas uu ahaa mid argagaxiso oo naxdin leh ,wuxuuna ku tilmaamay in ay muuqato in loogu talagalay in lagu xasuuqo shacab aan waxba galabsan.
Waxa uu tacsi u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaana ehelada dadkii ku dainty weerarkaas.
Waxaan cambaareyneynaa weerarkii argagaxisada ee naxdinta leh, kaa oo lala eegtay shacab aan waxbo galabsan, weerarkaasi waxaa ka dhashay khasaare baaxad weyn leh, waxaana u aragnaa inuu yahay fal naxariis darro ah”ayuu yiri
Micheal Keating oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in ay xoojin doonaan taageerada ay siiyaan dadka Soomaaliyeed kana shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa mustaqbal iyo nabad waarta oo ka dhalata Soomaaliya.
Qaraxa ayaa loo adeegsaday gaar Axadii shalay ,wuxuuna ka dhacay goob suuq ah oo ku yaalla xaafada Kaawo godey ,degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.